ကိန္နရာဖိုမတို့ တယောက်လက်ကို တယောက် မလွှတ်ပဲ ရှိနေကြယုံမျှမက မိုးသံလေသံကြားတိုင်း ဘက်ငိုနေကြပုံကို ဘုရင်ကြီးက မေးကြည့်ရာ တညတာ ကွဲကွာခဲ့ဘူးသဖြင့် ၁၉၆၃ ခု ဇန်နဝါရီလထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ သတ္တိဂျာနယ်။ ပုံအတွက် ကျေးဇူး။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
သချင်္ာတွက်စို့ ပူစူး (ချောက်) ၏ ကဗျာ ချောက်မြို့မှာ သတ်ပုံမှန်ပါစ။ တယောက်တလက် တို့စိုက်ခင်း ဘော်ဘော် (သလ္လာ) ၏ ကဗျာ သလ္လာ ခေါ် မုံရွာမှာ သတ်ပုံမှန်ပါစ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
စကား နဲ့ စာ ကဗျာ နှင့် ဝတ္ထု
ဆရာ မြန်မာစာမှာ ဝါကျအဆုံးကို တယ် နဲ့ မဆုံးပါဘူး။ တယ် ဆိုတာ စကားမှာပဲသုံးတာ။ စာမှာ တယ် နဲ့မသုံးဘူး လို့ လိုင်းပေါ်မှာ အငြင်းအခုန်ဖြစ်နေတာတွေ့ရလို့ ဗဟုသုတရအောင် ပြန်ဖြေပေးစေလိုပါတယ်။ အစဉ်အလာစာရေးသားနည်းအရ ဝါကျအဆုံးမှာ သည်၊ ၏ နဲ့ အဆုံးသတ်တာများတယ်။ တကား၊ သတည်း၊ လတ္တံ့၊ ပါကြောင်း၊ ပါစေ၊ ပါသည်၊ ပေသည်၊ မည်၊ လေပြီစတာတွေလည်း အဆုံးမှာရေးကြတယ်။ ဟိုအရင်က စာကို စာရေးသလိုသာ ရေးခဲ့ကြတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ စကားပြောသလိုစာရေးနည်း ဖြစ်လာတယ်။ ဖြစ်စမှာ ဆွေးနွေးငြင်းခုန်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီကာလကို မီလိုက်တယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ နောက်တော့ စကားပြောသလို စာရေးနည်းကို တွင်ကျယ်လာတယ်။ စကားပြောသလိုစာရေးနည်းမှာ ပိုကောင်းလာတွေရှိသလို သတ်ပုံပျက်လာတာတွေလည်းရှိတယ်။ ကြာလာတော့ အများလက်ခံတဲ့ စကားစာလုံးတွေပါ သတ်ပုံကျမ်းတချို့မှာ ထည့်သွင်းလာတယ်။ တယ် စာလုံးက တခုဖြစ်ပါတယ်။ အများကြီးရှိတယ်။ မနေ့ကတင်လိုက်တဲ့ ရယ် နဲ့ ရီ။ တယ်လို့ရေးတာကို အများလက်ခံလာရာကနေ ဒယ် လို့ရေးတာတွေ့လာတယ်။ မှားတယ်။ တရ် လို့လည်း တွေ့လာတယ်။ မှားတယ်။ တယ် ကယ်တော်ပါလား ခါတယ် ချိုးတယ် ချိုတယ်လူးနွား တင့်တယ်သည် တင့်တယ်လျောက်ပတ် တယ်တိန်ညင် တယ်ကြက် တယ်လီဖုန်း တယ်ကောင်းပါ
ရူပါရုံ အိပ်မက် မက်ကို မက်ရမယ်။ ခက်လက်နုဝေစည် တပြည် တကျီဆောက် ကြယ်တံခွန် မိုးသောက် ယောက်ျားကောင်းတယောက်။ မောင်ပေါက်စည် (မန်းတက္ကသိုလ်) ရဲ့ကဗျာတပုဒ်ကို မိတ်ဆွေတယောက်က တင်ပေးထားတယ်။ ကျေးဇူး။ အဲဒီခေတ်က ကဗျာဆရာတွေက မြန်မာစာသတ်ပုံမှန်အောင် ရေးကြပါတယ်။ တရွာတကျီဆောက်ကလည်း စကားပုံပဲ။ အခုတော့ တစ်ပြည်လုံး တစ်ကျီဆောက်နေကြတဲ့ မြန်မာစာ ယောက်ျားကောင်းတယောက် ဟုတ်ပါ၏လော။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ချစ်ခင်စုံမက် ချစ်ခင်စုံမတ် ဘယ်ဟာအမှန်လဲဆရာ မတ် တသမတ် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ ပရမတ် မင်းတိုင်ပင်အမတ် မတ္တရာမြို့ မတ် (ညီမ၏ခင်ပွန်း) မတ်ခွက် မတ်တတ်စာ မတ်တတ်နာ မတ်တတ်ယပ် (ယပ်တောင်) မတ်တတ်ရပ်လို့ လမ်းမှာငို မတ်တရာ = ကျပ်အစိတ် မတ်ပဲ မတ်မတ်စိုက်ပါ မတ်မတ်တူးပါ မတ်ရပ်ပုံတော် မတ်လ မတ်စေ့ မတ်စောက်သော မရီးနှင့် မတ် မှူးမတ် ရာဇမတ် သွားကာမတ္တ ထောင်မတ်နေသည် ဖြောင့်မတ်သူ နှစ်မူး တမတ် ငွေတမတ်၊ ငွေတစ်မတ် မဟုတ်။ မတ််တရာ ကျပ်အစိတ်။ မတ် သဒ္ဒါ ညီမနှင့် မတ်၊ လောကနတ်ကို၊ ရိုညွတ်အစုံ မင်းထက်အမတ်၊ အရှိမြတ်မူ၊ ရေရွတ်ဗိုလ်လူ မင်းမှူးမင်းမတ်၊ ဝန်ပတ်ပြောထူ နိုင်တမ်းမချွတ်၊ တရားဖြတ်သည်၊ မတ်မတ်နှလုံး တော်သတည်း ရွေးပဲမူးမတ်၊ ခွဲကျပ်ပိဿာ ငွေစင်တမတ်၊ ဖြတ်၍ရောင်းလည်း တံခွတ်ရိမတ်၊ မလည်ထွတ်ဝယ်၊ ရေနတ်နဂါး (ကျော်အောင်စံထားဆရာတော် ဝါဟာရတ္ထပကာသနီ ကောက်နုတ်ချက် ၁၉၆၉ ခု၊ ဟံသာဝတီတိုက်ထုတ်) မက် ကရမက် စုံမက်ချစ်ခင် တပ်မက်သည် မက်ကလောင်နာ မက်မက်မောမော မက်မန်းသီး မက်မွန်သီး မက်လင်ချဉ် မက်မောတွယ်တာသည် ရဲမက်ဗိုလ်ပါ သမက် အိပ်မက် ဘူရိဒတ် လင်္ကာ တရှိုက်မက်မက်၊ တသက်သက်လျှင်၊ စက်လက်မျက်ရည်၊ ဆည်လည်းမတတ်၊ မိန်းသေပြတ်မျှ၊ ကြင်ဆွတ်လေလေ၊ အောက်မေ့ချေသော
Reality Show ၁၉၇၀ နှစ်များအတွင်းက မန္တလေးမြို့
ကျွန်တော်တို့ ဆေးကျောင်း နောက်ဆုံးနှစ်မှာ ပညာသင်နေကြချိန်က ဖြစ်ပါတယ်။ စျေးချိုတော်၊ ဘူတာကြီး၊ ဘုရားကြီး။ မြင်းလှည်း၊ ​ဆိုက်ကား၊ စက်ဘီး။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
laparoscopy or open surgery for ovarian cyst
ဆရာရှင့် ကျွန်မအသက် ၃၁ ပါ။ ၄နှစ်အရွယ်သားတယောက်အမေပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃လလောက်က ဗိုက်ထဲရေအိတ် ၇cm အရွယ်ရှိလို့ သေးနိုင်မလားဆိုပြီး ဆေးထိုးဆေးသောက်လုပ်ခဲ့ရပါတယ် အခုမသေးလို့ og ကခွဲဖို့အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။ သမရိုးကျဗိုက်ခွဲနည်းနဲ့ မှန်ပြောင်းနဲ့ ပိုက်ထည့်ခွဲနည်းရွေးချယ်ခိုင်းပါတယ်။ ပိုက်ထည့်ခွဲနည်းရဲ့ ဆိုးကျိုးလေး ကောင်းကျိုးလေးသိပါရစေဆရာ။ အကယ်၍ပြောင်အောင်မစုပ်ထုတ်ရင် ကျန်ခဲ့မှာစိုးရိမ်လို့ပါဆရာ။ သမရိုးကျအတိုင်းပဲဗိုက်ခွဲသင့်လားဆရာ။ အကြံလေးပေးပေးပါဆရာရှင့်။ လေးစားစွာဖြင့် ခွဲစိတ်ကုသနည်းတိုင်းမှာ အကောင်းနဲ့ အဆိုးတွဲနေတယ်။ တခုစီကို မရေးတော့ပါ။ ကိုယ်တိုင်လည်း ချင့်ချိန်နိုင်ပါတယ်။ လူနာကျန်းမာရေး။ မျိုးဥအိမ်အိတ်အရွယ်အစား။ ဆေးရုံအဆင့်အတန်း။ ကုန်ကျစရိတ် စသည်။ ကျွန်တော်က အခြေအနေ အပြည့်အစုံ မသိပါ။ If you want proper treatment with less pain and fewer cuts on your body, you should go with Laparoscopy especially when it is about procedures or operations related to your abdominal or pelvic regions. Open surgeries require more time to recover than the laparoscopy surgeries. ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
(ကန်တော့) Anovera (Segesterone acetate and ethinyl estradiol vaginal system) Delivers 0.15 mg/0.013 mf per day) ယူအက်စ်အေမှာ ကြော်ငြာနေတဲ့ ဗဂျိုင်းနားထဲ ထည့်ထားရသည့် ကိုယ်ဝန်တာဆေးကွင်း။ ဟော်မုန်း ၂ မျိုးပါသည်။ silicone ring ဆီလီကွန် ကွင်းငယ်ဖြစ်သည်။ ၂၁ ရက်ထည့်ထား။ ၇ ရက်နား။ ပြန်ထည့်။ ၉၇% ထိရောက်မှုရှိ။ ဆရာဝန်လက်မှတ်နဲ့သာရောင်းချ။ တကွင်း တနှစ်ခံ။ ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အီစထိုဂျင် ပါဝင်မှု အလွန်နည်း။ Estrogen is very low at 13 mcg per day မသုံးသင့်သူများ အသက် ၃၅ နှစ်အထက် ဆေးလိပ်သောက်သူများ အသက် ၃၅ နှစ်အထက် မိုင်ဂရင်းရောဂါရှိသူများ ကလေးနို့တိုက်နေသူများ ရာသီမမှန်သူများ မကြာမီ ခွဲစိတ်ကုသရန် အစီအစဉ်ရှိသူများ အသဲရောင်စီ ဆေးသောက်နေရသူများ အဝလွန်သူများ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
One minute တမိနစ်
• Google ဂူဂယ်လ်မှာ ရှာဖွေမှုပေါင်း ၂့၃ သန်းရှိမည်။ • Wikipedia ဝီကီပီးဒီယားမှာ အသစ် ၇ ခုတင်မည်။ • YouTube ယူကျုမှာ နာရီ ၄၀၀ စာ ဗီဒီယိုတင်မည်။ • ကမ္ဘာမှာ ကလေး ၂၅၀ ယောက်မွေးဖွာလာမည်။ • ကမ္ဘာမှာ လူတွေက အစားအစာ ပေါင် ၁၁့၅ သန်း စားသုံးကြမည်။ • ယူအက်စ်အေမှာ ၁၁၆ ယောက် လက်ထပ်ကြမည်။ • ယူအက်စ်အေမှာ ကားခိုးမှု ၂ ခုဖြစ်မည်။ • ယူအက်စ်အေမှာ ကလေး ၁၁၃ ယောက် ဆင်းဆင်းရဲရဲ မွေးဖွားလာကြမည်။ • ယူအက်စ်အေမှာ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ရာဇဝတ်မှု ၂ ခုကျူးလွန်မည် • ယူအက်စ်အေမှာ အမှိုက် ၉၅၀၁၈၆ ပေါင် စွန့်ပစ်ကြလိမ့်မည်။ • ယူအက်စ်အေမှာ သေနတ်အလက် ၄၀ ရောင်းချရမည်။ • သင် မျက်တောင် ၁၅ ကြိမ်ကနေ ၂၀ ကြိမ်ခတ်မည်။ • သင့်နှလုံး အကြိမ် ၆၀ ကနေ ၁၀၀ အထိခုန်မည်။ • သင့်နှလုံးကနေ သွေး ၅ ကွာတ ထုတ်လွှတ်မည်။ • အပင် သို့မဟုတ် အကောင် မျိုးစိပ် ဝ့၁၅ ခုပျောက်ကွယ်မည်။ • သွေးလည်ပတ်မှုစနစ် ၃ ပတ်လည်မည်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ထွီ ကံများနှယ် ဆိုးလိုက်တာ။ ကွမ်းသွေးတောင် မနီတော့ဘူး။ အပင့်အခေါ်လာသူ မရှိတာလည်းကြာပြီ။ သည်မိန်းမလုပ်စာ စားရတာ မျိုမကျချင်ဘူး။ ကရုဏာသက်လို့တော့ ဘယ်ဟုတ်မှာလဲ။ အပင်းလျှိုတယ်ချည့် ပြောပြောနေတယ်။ မကြားတကြား ပြောတာလဲမဟုတ်။ ခြေရင်း ခုနစ်အိမ်၊ ခေါင်းရင်း ခုနစ်အိမ် ကြားရတယ်။ ငါကလဲ ဘယ်ထိုင်နေချင်ပါ့မလဲ။ အပင့်အခေါ်လာတယ်ဆိုယင် လက်ဖက်ရည်တခွက်လောက်ကတော့ သေချာတယ်။ ကာရန်ပြေယင် ထမင်းတနပ်လောက်လဲ စားချင်စားရမယ်။ ရမ်းကုဆေးဆရာတယောက်ပါတဲ့ မောင်သာရရေးတဲ့ဝတ္ထု အခန်း ၁ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုခေတ်စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာ၊ မြန်မာစာဆရာ၊ ဒေါင်းလုဒ်ရမ်းကုဆရာတွေကတော့ - မကြားတကြား မဟုတ်။ လက်ဖက်ရည်တခွက် မဟုတ်။ ထမင်းတနပ် မဟုတ်။ မြန်မာစာ့ကျောမှာ ဒဏ်ရာတွေနဲ့။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
တာမွေဟာ အခုအခါမှာတော့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မှာရှိတဲ့မြို့နယ်တခုဖြစ်ပါတယ်။ တာမွေ ဆိုတဲ့နာမယ်ဟာ မွန်ဘာသာဖြစ်ပြီး မွန်လို တာမွဲ လို့ရေးပါတယ်။ အသံထွက်က တားမွယ် ဖြစ်ပြီး မြန်မာလို ထန်းတပင် လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ တာမွေ ဟာ ရှေးခေတ်အခါဆီက အခုရန်ကုန်လို့တွင်တဲ့ ဒဂုံမြို့အနီးက ရွာတရွာ ဖြစ်ပါတယ်။ တာမွေရွာကိုဘယ်အချိန်ကစပြီးတည်တယ်ဆိုတာကိုတော့ သေသေချာချာမသိရပါဘူး။ တာမွေရွာ နာမယ်ကို ပဲခူးဟံသာဝတီမှာနန်းစိုက်တဲ့ ဗြမိုင်ရာဇာဓိရာဇ်ဘွဲ့ခံ မွန်ဘုရင်ဗညားဒလ နဲ့ ရွှေဘိုရတနာသိင်္ဃမှာနန်းစိုက်တဲ့အလောင်းဘုရားဘွဲ့ခံ မြန်မာဘုရင်ဦးအောင်ဇေယျတို့လက်ထက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကုန်းဘောင်-ဟံသာဝတီစစ်ပွဲတွေမှာစပြီးတွေ့ရပါတယ်။ ဒီစစ်ပွဲတွေမှာနောက်ဆုံးမှာတော့ အလောင်းဘုရားဦးအောင်ဇေယျဟာ မွန်ဘုရင်ဗညားဒလရဲ့ ပဲခူးဟံသာဝတီမြို့တော်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီး ပုသိမ်၊ ဒဂုံ၊ ပဲခူး၊ မုတ္တမ စတဲ့ ဒေသတွေပါဝင်တဲ့ မွန်နိုင်ငံဟာ မြန်မာအင်ပိုင်ယာအတွင်းသွတ်သွင်းခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ အေဒီ ၁၇၅၇ခု အလောင်းဘုရား မသိမ်းပိုက်ရသေးခင်အချိန်တွေအထိ ပြည်မြို့ နဲ့ တောင်ငူမြို့တို့ရဲ့ တောင်ဘက်ဒေသတွေဟာ မွန်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တာမို့ ဒီဒေသတွေက‌ ရှေးမြို့ရွာနာမည်တွေဟာ မွန်ဘာသာနဲ့
၁၂-၂-၂၀၂၂ မှာကျရောက်မဲ့ ၇၅ နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနေ့ကို အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက ပြောလာတယ်။ တထောင့်ကိုးရာ လေးဆဲ့ခွန် ဖေဖော်ဝါရီ လမြတ်မွန် ၁၂-၂-၁၉၇၂ နေ့ထုတ် ရွှေသွေးဂျာနယ်ပါ စန္ဒာမြင့်ရဲ့ ကဗျာဖြစ်ပါတယ်။ တထောင့်ကိုးရာလို့ရေးတာကို တင်ပြပါတယ်။ ခွန်ကတော့ အသံကို ကာရန်ယူတာဖြစ်တယ်။ စာလိုရေးရင် ခုနစ်လို့သာ ရေးပါတယ်။ သတ်ပုံမှန်သော ပြည်ထောင်စုဖြစ်လာပါစေသတည်း။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
၂၀၁၅ ခုနှစ်က - - အသိအမျိုးသမီးအဆိုတော်တယောက် စန္ဒယားခုံပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။ - မေးလိုက်တယ် ဧယဉ်ကျူးနေတာလား။ - အသိစာရေးဆရာတယောက်ကရေးတယ်၊ လှည်းနေ လှေအောင်း မြင်းဇောင်းမကျန် တဲ့။ - ပြန်ပြောလိုက်တယ် အနီးနေ အဝေးနေ၊ သုခိတ ဒုက္ခိတ၊ သုံးဆယ့်တဘုံ အကုန်ပါ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ကျွန်တော်တို့ဟာ ပညာတွင်းနက်တဲ့ခေတ်မှာ စာသင်ခဲ့ရတယ်။ ခေတ်သဘောအရ ခေတ်နောက်ကျခြင်းနဲ့အတူ အလယ်တန်းကျောင်းသားဘဝမှာ စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခြင်းဟာလည်း အဓိကအကြောင်းခံတခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်တန်းမှာ သိပ္ပံဘာသာတွဲကို အင်္ဂလိပ်လိုမသင်ရလို့ အမိန့်ထုတ်တာနဲ့ ကြုံခဲ့ရတယ်။ ဆေးကျောင်းရောက်တော့ ဆေးစာအုပ်အလွန်ရှားပါးလို့ ကျောင်းသားကြီးတွေက လက်ဆင့်ကမ်းကြရတယ်။ ဒုတိယအကြိမ် စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတော့ နိုင်ငံရေးကြောင့် ပြည်ပထွက်ပြေးရတယ်။ ပြည်တွင်းက စာအုပ်တွေ မှာမရနိုင်။ စာအပေးအယူလုပ်တာတွေ့ရင် အဖမ်းခံရတယ်။ အဲလိုအခက်အခဲကြားကနေ ပညာရှာကြရပါတယ်။ ပုံကတော့ ၁၉၉၂ ခုနှစ် ဒိုင်ယာရီ နောက်ဆုံးစာမျက်နှာတွေမှာ မှတ်စုရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပြူတာ မသုံးနိုင်သေးတဲ့ကာလ။ နယူးဒေလီမှာ နေစဉ်က။ ပညာရှာရတာခက်ခဲပေမဲ့ မြန်မာစာကို သတ်ပုံမှန်နဲ့သာရေးကြောင်း အထောက်အထားလေးတခု ရတယ်။ တလုံးတည်းဖြင့် အေး သံထွက်ရ၏။ ရူးပီး ၅၀ ပြည်တွင်းမှာနေသူတွေက ကျပ်ငွေတန်ဖိုးအကြောင်း ရေးသားနေကြချိန်မှာ ကျွန်တော့ ၁၉၉၂ ခုနှစ် ဒိုင်ယာရီထဲက အိန္ဒိယပိုက်ဆံ ၅၀ တန်တရွက် ထွက်လာတယ်။ ကျွန်တော့ရာထူးတာဝန် တံဆိပ်တုံးလည်းပါတယ်။ အဲဒီကာလမှာ ကျွန်တော်လည်း ရှိစုမဲ့စုလေး သိမ်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါမယ်။ ဒ
CDC to pregnant women: Get vaccinated against Covid-19 ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးပါရန်
၂၉-၉-၂၀၂၁ CNN သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန် CDC ခေါ် ကူးစက်ရောဂါများထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ အရေးပေါ်လမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးပါတဲ့။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တော့မဲ့သူတွေနဲ့ နို့တိုက်မိခင်တွေလည်း ထိုးနိုင်တယ်။ အခုထိတော့ ယူအက်စ်အေမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ၃၁% ကသာ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးကြသေးတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ထောင်နဲ့အမျှ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရလို့ ဆေးရုံတက်ကုသမှုခံယူနေကြရပြီး ၁၆၀ ယောက် သေဆုံးပြီ။ သြဂတ်စ်လထဲမှာ သေဆုံးတာ ၂၂ ယောက်ရှိတယ်။ အမေရိကားမှာ အာရှကလာနေထိုင်သူတွေက ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု ၄၅့ရ% နဲ့ အမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်။ လက်တီနို ခေါ် စပိန်စကားပြောအုပ်စုက ၂၅% သာထိုးကြတယ်။ အာဖရိကန်အမေရိကန်တွေက အနည်းဆုံး ၁၅့၆%။ ယူအက်စ်အေမှာက Pfizer နဲ့ Moderna အမျိုးအစားတွေကို ထိုးတယ်။ မြန်မာပြည်မှာက တရုပ်ဆေးဖြစ်လို့ သူ့သတ်မှတ်ချက်တွေကိုသာ လိုက်နာရပါမယ်။ တရုပ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအကြောင်း မကြာခဏ တင်ပြထားပြီးပြီ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၃၀-၉-၂၀၂၁
စကားပုံကို သတ်ပုံမှန်အောင်မရေးတာတွေ့လို့ ပြန်တင်ပါတယ်။ ရွှေဘသည် ဇာတ်ကားတိုင်းမှာ အနိုင်ရသောဇာတ်လိုက်ဖြစ်၏။ တဝမ်းပူသည် အရှုံးသမားဖြစ်သွား၏။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
Breast Cancer Awareness Month ရင်သားကင်ဆာ အသိပညာပေးလ
White House goes pink for Breast Cancer Awareness Month ၂၀-၁၀-၂၀၁၆ နေ့ညမှာ အမေရိကန်သမတအိမ်ဖြူတော်ဟာ ပန်းရောင်မီးတွေထိုးထားလို့ ပန်းရောင်အိမ်တော် ဖြစ်လို့နေပါတယ်။ ရင်သားကင်ဆာအသိပညာပေးတဲ့အနေနဲ့ အဲလိုလုပ်တာပါ။ အိမ်တော်ခြံစည်းရိုးအပြင်မှာ လူတွေတန်းစီပြီးရပ်ကြတယ်။ နေဝင်တာနဲ့ ပန်းရောင်မီးဆလိုက်တွေထိုးပါတယ်။ အဲဒီအစဉ်အလာဟာ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် သမတဘွတ်ရှ် လက်ထက်ကတည်းက စတယ်။ ဘာရက်ကိုဘာမားလက်ထက်မှာ အောက်တိုဘာလကို ရင်သားကင်ဆာ အသိပညာပေးလအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ရောဂါကို အစောဆုံးသိအောင်လုပ်ဘို့ပါပဲ။ Breast Cancer writings ရင်သားကင်ဆာ စာများ BI-RADS ရင်သားကင်ဆာစစ်ဆေးခြင်း https://dr-tint-swe.blogspot.com/2021/01/bi-rads.html Bleeding nipple နို့ကနေသွေးထွက်ခြင်း https://dr-tint-swe.blogspot.com/2021/05/bleeding-nipple.html Breast Cancer Chemotherapy ရင်သား-ကင်ဆာကို ဆေးပေးကုသခြင်း https://dr-tint-swe.blogspot.com/2021/05/breast-cancer-chemotherapy.html Breast Cancer HER2 ဟော်မုန်းသက်ရောက်မှုနဲ့ ရင်သားကင်ဆာ https://dr-tint-swe.blogspot.com/2021/05/breast-cancer-her2_12.html Breast Cancer Links ရင်သားကင်ဆာ စာမ
Health Gossip ခပ်တည်တည်နဲ့ လိမ်ညာခြင်း
စာက ရေးထားတာ ၄ နှစ်ကြာပြီ။ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ Gossip Girl ရုပ်ရှင်ကြောငြာတခုတွေတာနဲ့ တိုက်ဆိုင်လို့ ပြန်တင်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်တိတိက မေးပါတယ်။ ဆရာခင်ဗျား ဇဝေဇဝါဖြစ်အောင်ရေးထားတဲ့အတိုင်း ဖြစ်နိုင်၊ မဖြစ်နိုင် အများသူငှာသိနိုင်ဖို့ ပို့စ်လေး ရေးပေးပါခင်ဗျာ။ ရိုသေလေးစားလျက်ပါ။ ၁။ Myawady Health မှာနာနတ်သီးစားမိရာမှ AIDS ဖြစ်ခေါင်းစဉ်နဲ့ တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းပါအကြောင်းတွေ ချုပ်ရင် အသက် ၁ဝ နှစ်အရွယ် ကောင်လေးတယောက်၊ နာနတ်သီးစိတ်ဝယ်စား၊ နောက် ၁၅ ရက်ကြာတဲ့အခါ နေမကောင်းဖြစ်၊ ဆေးစစ် HIV ရောဂါပိုးတွေ့ရှိ၊ နာနတ်သီးစားမိရာမှ HIV ကူးစက်ခဲ့။ လမ်းဘေးအစားအစာ ဝယ်စားတာ သတိထား တဲ့။ မှားတယ်။ HIV ဆိုတာ (၁) လိင်ဆက်ဆံမှု။ (၂) ပိုးရှိမိခင်ကနေမွေလာတဲ့ကလေး နဲ့ (၃) ဆေးထိုးအပ်ကနေသာ ကူးစက်နိုင်တယ်။ ဘာစားစား မကူးပါ။ ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ ဆေးရုံကနေ နာနတ်သီးရောင်းသူထံ အမြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်လို့ ရေးထားတယ်။ အဲတာလည်း မှားတယ်။ HIV တရားခံရှာတဲ့အလုပ်ကို ဆေးရုံက ဘယ်ဆရာဝန်ကိုမှ သွားကြည့်ဖို့ တာဝန်ပေးထားနိုင်တာမရှိပါ။ ကပ်ရောဂါလိုဖြစ်ရင်သာ ရောဂါကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေက ချက်ချင်းဆောင်ရွက်ကြရပါတယ်။ AIDS ဝေဒနာရှင် နာနတ်သီးသည်လ
ရေးသူ - လူထုဒေါ်အမာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး မဖြစ်ခင်တုန်းက ကျွန်မတို့ မန္တလေးမှာ လူ့အလွှာတလွှာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့က မြန်မာဘုရင်များရဲ့ အနွယ်တော် မင်းဆွေစိုးမျိုးတွေနဲ့ မင်းမှုထမ်း ၀န်ကြီး၊ မှူးကြီး၊ မတ်ကြီးများရဲ့ အဆက်အနွယ် များပါ။ ဟိုတုန်းကတော့ သူတို့က တခြားသူများနဲ့ သိပ်ရောရောနှောနှော မရှိလှဘူး။ မရှိပုံက ဒီလိုပါ။ ကျွန်မက ၁၂၇၇- ခု တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် (၈) ရက်မှာ မွေးသူဆိုပါတော့။ ပါတော်မူပြီး နှစ်ပေါင်း (၃၀) တိတိ အကြာမှာ မွေးတဲ့ ဆင်းရဲသား သားသမီးပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ ကြီးပြင်းတဲ့ ခေတ်မှာတော့ ဘုရင်နဲ့၊ နန်းတော်အိမ်တော်နဲ့၊ မှူးကြီးမတ်ရာဆိုသူတွေရဲ့ မြေး၊ တတိယမျိုးဆက်လောက်နဲ့က ကျွန်မနဲ့ ကစားဖက်၊ ကျောင်းနေဖက် အရွယ်တွေပေါ့။ ဒုတိယမျိုးဆက်ကိုတော့ ကျွန်မက လူကြီးတွေအဖြစ်နဲ့ တွေ့မြင်သိမှီခဲ့သူပေါ့။ ဒီလူတွေက တတိယမျိုးဆက်လောက်အထိ ကျွန်မတို့နဲ့ တစပ်တည်း တကျုံ့တည်း မဖြစ်ပုံက ဒီလိုပါ။ သူတို့က စကားပြောရင် ညင်ညင်သာသာနဲ့ ခပ်တိုးတိုးပဲ ပြောတတ်ပါတယ်။ အော်လား ဟစ်လား မရှိဘူး။ နင်ပဲငဆ မပြောဘူး။ ဆဲရေးတိုင်းထွာ မလုပ်ဘူး။ သူတို့နဲ့ ကျွန်မတို့နဲ့ စကားပြောရင် ကျွန်တော်၊ ကျွန်မ မသုံးဘူး။ သူတို့နာမည်ပဲ ထည့်ပြောတယ်။ ကျွ
အန်တိုင် အန်တီ ဘယ်လိုခေါ်သင့်လဲ ဆရာ The prefix "anti" is acceptably pronounced both ways, however it is usually pronounced [antai] (or toalesser extent [anti]) when stressed or emphasized, and [antɪ] as in 'lid' when said otherwise. https://www.youtube.com/watch?v=U83V6HYFQ40 ဗြိတိန်အင်္ဂလိပ်လို အင်တီ အမေရိကန်အင်္ဂလိပ်လို အင်တိုင် အင်တီဘိုအောတစ် အင်တီဗိုင်းရပ်စ် အင်တိုင်ဘိုင်အောတစ် အင်တိုင်ဗိုင်းရပ်စ် မြန်မာလို ကြိုက်သလို။ အဒေါ်ကို အန်တီလို့ခေါ်ကြတယ်။ ယဉ်ကျေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုရေးရင် လွဲနေကြသူတွေက များတယ်။ Auntie နဲ့ Aunty လို့ ရေးတာကို အင်ဖေါ်မယ် ခေါ် ခပ်လွယ်လွယ်ရေးနည်းလို့ခေါ်တယ်။ မှားတော့ မမှားပါ။ Anty လို့ပေါင်းရင် မှားတယ်။ ယူအက်စ်မှာ Aunt လို့ရေးတယ်။ အန့်လို့ မြန်မာလိုခေါ်ပြန်ရင်လည်း အဆင်မပြေလောက်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ငယ်ငယ်က ဖတ်ခဲ့ရသော သတ်ပုံမှန်နဲ့ စာအုပ်များ
ကျောင်းသားတစု တကွေ့တော့ တမိုးသောက်သော် တမိုးချုပ်ပြီးရင် နောက်တမိုး တယောက် တဘဝ တလောက ငယ်ငယ်ကဖတ်ခဲ့ရတဲ့ သတ်ပုံမှန်စာအုပ်များ တစေ့တစောင်း တနေ့ ၂ ကျပ်စား နောက်တနေ့ နံနက် တဖောင်ဖောင်သတင်း တပြောင်ပြောင်လင်း သူတို့တတွေ နေဝင်ချိန် တနှစ်သား စာပေသမိုင်းတလျှောက် ကျောင်းသားတစု တကွေ့တော့ တမိုးသောက်သော် တမိုးချုပ်ပြီးရင် နောက်တမိုး တယောက် တဘဝ တလောက စာရေးဆရာတယောက် ကျေးတောသားတယောက် ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
တို့တစ်တွေဆိုတာ နံပတ်တစ် ရသူတွေ။ တို့တစ်တွေဆိုတာ ပဌမရသူတွေ။ တို့တစ်တွေဆိုတာ သတ်ပုံအမှားရေးပြိုင်ပွဲမှာ ဗိုလ်စွဲသူတွေ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
စာရေးဆရာတယောက် ကျေးတောသားတယောက် အရင်ကတော့ သတ်ပုံမှန်နဲ့ရေးမှသာ စာရေးဆရာ။ မြန်မာစာကိုအာဏာသိမ်းတော့ သတ်ပုံမှားရေးမှသာ ထုတ်ဝေခွင့်ပေးတယ်။ အခုထိ နာခံကြတယ်။ အွန်လိုင်းကို ဒေါင်းလုဒ်ဆင်ဆာအဖွဲ့ကြီးက အာဏာသိမ်းထားတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
တယောက်တည်းက ပိုမှန်တယ်။ တယောက်ထဲလို့လည်း အရင်က ရေးခဲ့ကြတယ်။ တယောက်တည်းကို စသတ်တာကတော့ အမိန့်တော်ရသတ်ပုံသာဖြစ်ပါတယ်။ သုမေဓာရှင်ရသေ့ အလိုဆန္ဒရှိပါမူကား ထိုနေ့၌ပင် တရားကို မျက်မှောက်ပြုပြီး ကျွတ်တမ်းဝင်နိုင်ပေရာ၏။ သို့ရာတွင် သူ့၌ အလိုဆန္ဒမရှိ။ ငါသည် အစွမ်းအားကို မြင်သော ယောက်ျားဖြစ်ပါလျက် တယောက်တည်း ကူးမြောက်ခြင်းဖြင့် ငါ့အား အဘယ်အကျိုး ရှိတော့အံ့နည်း၊ ငါသည် သဗ္ဗညုတဉာဏ်သို့ ရောက်၍ နတ်နှင့်တကွသော လောကကို ကယ်တင်ပေအံ့၊ များစွာသော လူအပေါင်းတို့ကို ကယ်တင်ပေအံ့ - ဤသို့ အကြံဖြစ်သည့်အတိုင်း သုမေဓာရှင်ရသေ့သည် ဒီပင်္ကရာ ဘုရားရှင်ထံ၌ ဘုရားဆုပန်လေသည်။ ထိုအခါ ဒီပင်္ကရာ ဘုရားရှင်းက နောင်သောအခါ ထိုသူသည် ကပိလဝတ်ပြည်၌ ခမည်းတော် သုဒ္ဓေါဒနဘုရင်နှင့် မယ်တော်မာယာ မိဖုရားတို့မှ မွေးဖွား၍ တောထွက်ပြီးသော် နေရဥ္ဇရာမြစ်အနီးရှိသော ညောင်ဗုဒ္ဓဟေပင်ရင်း၌ ဂေါတမအမည်ဖြင့် ဘုရား ဖြစ်လတ္တံ့ဟူ၍ ဗျာဒိတ်ပေးခဲ့လေသည်။ တယောက်တည်း ကူးမြောက်ခြင်းဖြင့် ငါ့အား အဘယ်အကျိုး ရှိတော့အံ့နည်းသတ်ပုံကို တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ခုခေတ်မှာ တကျော့ကို မှန်အောင် ရေးတတ်သူ ရှားပြီ။ မြန်မာစာအာဏာပိုင် ဆရာကြီးတွေအစ မှားရေးခိုင်းနေကြတယ်။ တကြော့နှစ်ကြော့ တေးကိုသီ ကဗျာ တကျော့နှစ်ကျော့ ရုပ်ရှင် အဟောင်း တကျော့နှစ်ကျော့ ရုပ်ရှင် အသစ် တကျော့နှစ်ကျော့ တေးကိုသီ သီချင်း http://www.gio.ee/watch?v=bkKqCtMMLgs မှန်ကန်တဲ့ မြန်မာစာ တကျော့ပြန်လာပါစေသတည်း။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ဆက်ရက် နှင့် ချိုးငှက်
အရင်က ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ ဇရက်လေလား ဂျိုးလေလားလို့ရေးထားတယ်။ သတ်ပုံမှန်က ဆက်ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ ချိုးငှက်လို့က မှန်တယ်။ ဆက် ကုတ် (ဂုတ်) ဆက်နာသည် ဆက် (ဇက်) ကြောတင်းသည် ဆက်၍ပြောပါ ဆက်ကပ်သည် ဆက်ကမ်းသည် ဆက်ခံစိုးစံသည် ဆက်စပ် ဆက်ဆံပေါင်းသင်းသည် ဆက်ဆက်ကြွပါ ဆက်တိုက်လုပ်သည် ဆက်ရက်ငှက် ဆက်လက်ပြုလုပ်သည် ဆက်ကြေး ဆက်နွှယ်နေသည် အဆက်အနွယ် ချိုး ကျိုးအောင်ချိုးသည် ချိုးကပ် ချိုးကူ ချိုးချိုးချက်ချက် ချိုးခြေရာမြက် ချိုးငှက် ချိုးစာကောက်မြက် ချိုးနှိမ် ချိုးပိန်တူးငှက် ချိုးဖျက် ချိုးမှုတ် ချိုးရေသုံးရေ ချိုးလင်းပြာ ချိုးလည်ပြောက် ချိုးသိမ်းငှက် ထမင်းချိုး ရေချိုး ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
Rivers အနှစ်နှစ်ဆယ် မြစ်နှစ်ဆယ်
မိတ်ဆွေတယောက်က ရွှေစက်တော်ဘုရားပွဲပုံတင်လို့ မမြင်ဘူး မူး မြစ်ထင်ဆိုပြီး ရေးလိုက်တယ်။ ကျွန်တော် မရောက်ဘူးသေးပါ။ မမြင်ဘူး မူး မြစ်ထင်ဆိုရိုးစကားအဓိပ္ပါယ်ကို အကောက်လွဲတတ်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း ပါတယ်။ မုံရွာကနေ မန္တလေးကိုသွားတိုင်း မူးမြစ်ကို ဖြတ်ရတယ်။ ဆိုစကားထဲက မူးနဲ့ ညောင်ပင်ဝန်းနာက မူးမြစ် မတူပါ။ မူးဆိုတာ ချောင်းငယ်လို့ အဘိဓာန်ကဆိုတယ်။ ရေစီးကြောင်းကြီးတာကို ချောင်းခေါ်တယ်။ ရေက အစဉ်မပြတ် စီးနေမယ်။ မိုးရွာမှသာ ရေစီးတာကို ယမား ခေါ်တယ်။ ချောင်းတွေနဲ့ ယမားတွေစီးဝင်တာကို မြစ်ခေါ်တယ်။ မြစ်ကလည်း အသေး အလတ် အကြီး။ ပင်လယ်နဲ့ သမုဒ္ဒရာ ပထဝီထဲမှာ။ မြစ်ကြီးငါးသွယ် မြစ်ငယ်ငါးရာ စာထဲမှာ။ အနှစ်နှစ်ဆယ် မြစ်နှစ်ဆယ် ချင်းတွင်းဘေးမှာလူဖြစ်၊ မူးမြစ်ကို တနှစ်မှာ ဆယ်ခါကျော်ဖြတ်၊ အရှေ့ရပ်က ဧရာဝတီဘေး၊ မန္တလေးမှာ ဆေးပညာသင်ခဲ့ရသည်။ ဆရာဝန်ဖြစ် ၁၅ နှစ်အကြာ၊ မြန်မာပြည်မှာ သွေးနဲ့ချွေးတို့စီးဆင်းရာ ဒုက္ခမြစ်ကြီးတစင်း ပေါ်ထွန်းလာ၊ နိုင်ငံရေးပင်လယ်မှာ ခုန်ချမိ၊ ကနေ့အထိပါ။ မဏိပူရ ခေါ် မြစ်သာမြစ်နဲ့ ကုလားတန်ခေါ် ချင်သုပွေမြစ်တွေကို ကျော်ပြီးသကာလ၊ တရားခံပြေးဘဝ စခဲ့ရပါသည်။ ယမုန်နာမြစ်စ်စီး ဆင်းရာ ဒေလီမှာသာ၊ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်က
Lactose Intolerance လက်တို့စ် နို့လက်မခံနိုင်တဲ့ ဝမ်းပျက်ရောဂါ
၁။ မဂ်လာပါဆရာရှင့် အမေ နဲ့ ကျမ သားအမိနှစ်ယောက်လုံးအတွက်မေးချင်လို့ပါရှင့် အမေက အသက် ၆၃ ကျမအသက်က ၃၃ ပါ ကျမတို့သားအမိနှစ်ယောက်လုံး လေပွတာ ရက်နည်းနည်းကြာလာပါပြီ ဝမ်းကလဲ သွားတာ အကြိမ်ရေများပါတယ် ဝမ်းပျက်သလိုဗိုက်နာပြီးသွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ခဏခဏ အိမ်သာသွားတာပါ မနက်အိပ်ယာ နိုးရင် မခံမရပ်နိုင်အောင်ဗိုက်ဆာပြီး ညပိုင်းဆို ဗိုက်က ဒုက္ခပေးပါတယ် ညပိုင်းဆို လေပွ ရင်ထဲ နေမထိထိုင်မသာဖြစ်ပြီး ကတုန်ကရင်အိပ်မရဖြစ်တယ် ဗိုက်ပွတာပါ ညတိုင်းလိုလိုပဲ အရင်က တခါတလေပဲဖြစ်ပေမဲ့ အခုက ရက်စိပ်လာပါတယ် နေ့ခင်းတွေကျထမင်းစား ပြီးတာနဲ့ မစာမကျေသလို အီလည်နေတတ်ပြီး လေကတချိန်လုံးပွနေတယ် အစားအသောက်တော်တော်များများ စားမရတာကြာပါပြီ ထမင်းစားလဲ အချဥ်အစပ် ထည့်စားရင်ပိုဆိုးပါတယ်ခံစားရတာ နို့ထွက်စာ စားရင်လဲ နေမထိထိုင်မသာ ညပိုင်းဆိုပိုဆိုးတယ် ပေါင်မုန့်ကိတ်မုန့် အစုံပါပဲဆရာ တော်တော်များများကိုစားမရတာပါ ၂။ ဆရာရှင့်သမီးမှာအခက်တွေ့နေလို့ ကူညီပေးပါရှင့်။ သသားလေးက lactose နဲ့မတည့်တဲ့ကလေးပါ။ သမီးတို့ရန်ကုန်မှာ နို့မှုန့်ဝယ်ရတာခက်ခဲပါတယ်။ lactose free နို့မှုန့်တွေရှားပါတယ်။ အခုနို့မှုန့်တမျိုးက lactose free လို့မရေးဘဲ နို့မှုန့်ထဲတွင် lactose
High levels of stress increase hypertension risk in black individuals သွေးတိုး နှင့် စိတ်ဖိအား
တင်ထားတာတခုတွေ့လို့ လေ့လာမှုလုပ်ပြီး ရေးပါတယ်။ ဆေးစျေးနှုန်းများမေးမယ်ဆို သွေးကျဆေးဆောင်ထားပါ တဲ့။ ၁၆-၁၀-၂၀၁၉ နေ့က ဆေးသုတေသနသတင်းတခုကို ကိုးကားပါမယ်။ အာဖရိကန်နွယ်ဘွား အမေရိကန်တွေကို Jackson Heart Study ကနေ လေ့လာမှုလုပ်ခဲ့တယ်။ လူပေါင်း 1,829 ယောက်ကို ဆန်းစစ်တယ်။ ပျမ်းမျှအသက် 49 နှစ်။ ကျား 40% တို့ပါဝင်တယ်။ သူတို့ဟာ systolic BP သွေးဖိအား အထက်ဂဏန်း less than 140 mm Hg ထက်နည်းပြီး အောက်ဂဏန်း 90 mm Hg ထက်မများသူတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ လေ့လာမှုက ၇ နှစ်ကြာတယ်။ 48.5% တို့ဟာ hypertension သွေးတိုးဖြစ်လာတာတွေ့ရတယ်။ သူတို့ထဲက 30.6% တို့မှာ low-perceived stress စိတ်ဖိအားနည်းနည်းသာရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။ 34.6% စိတ်ဖိအားအသင့်အတင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။ 38.2% စိတ်ဖိအားများများရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။ ဒီသုတေသနကို တင်ပြသူအမည်က Darlene Dobkowski ဖြစ်ပါတယ်။ Mayo Clinic ကလေ့လာမှုတခု • Anxiety စိုးရိမ်စိတ်ကြောင့် တာရှည်သွေးတိုး မဖြစ်စေနိုင်။ သို့ရာတွင် ရုတ်တရက် စိုးရိမ်စိတ်များခြင်းကြောင့် ယာယီသွေးတိုးစေနိုင်။ • တကယ်လို့ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိုလို ရုတ်တရက် စိုးရိမ်စိတ်များနေရင် နှလုံး၊ သွေးလွှတ်ကြောလေးတွေနဲ့ ကျောက်ကပ်ကို ထိခိုက်သက်ရော
Cancers ခဏခဏမကြာမကြာ ပြောဘူးပါတယ်
ဆရာဝန်မဟုတ်သူတွေ ဖြေပါရန်သဘောနဲ့ မေးတာတခု တွေ့တယ်။ ကင်ဆာသမားက အသားထဲက ဘာသားစားရမလဲ အဓိက ဆရာဝန်က မနေတတ်လို့ ဖြေပါမယ်။ ကင်ဆာ ကကြီးကနေ အအထိ အများကြီးရှိတယ်။ လူတိုင်းစားတဲ့ အသားငါးဥစာရင်းတော့ ဆရာဝန်ထက်ပို သိကြမယ်။ ကင်ဆာနဲ့စားစရာ စာတွေ ခဏခဏ ထပ်ခါထပ်ခါ တင်ပြထားတယ်။ ကင်ဆာဆိုတာ စောစော သိဘို့လိုတယ်။ စနစ်တကျ ကုသရမယ်။ ကိုယ်တသက်လုံးစားလာတဲ့ အစားအစာ ၁၀၀% စားနိုင်တယ်။ အဆန်းတွေ မသင့်။ ရောင်းနေတဲ့ ဖြည့်စွက်စာတွေ ပိုက်ဆံသာကုန်စေမယ်။ A • Acute Lymphocytic Leukemia • Acute Myeloid Leukemia B • Basal Cell Carcinoma • Bile Duct Cancer • Bladder Cancer • Blood Cancers • Bone Cancer • Bone Metastases • Brain and Spinal Cord Tumors • Breast Cancer • Breast Cancer (Metastatic) C • Cervical Cancer • Chronic Lymphocytic Leukemia • Chronic Myeloid Leukemia • Colorectal Cancer D • Diffuse Large B Cell Lymphoma (DLBCL) E • Endometrial Cancer • Esophageal Cancer G • Gastric Cancer • Germ Cell Tumors H • Head and Neck Cancer • Hodgkin Lymphoma • Hypopharyngeal Cancer K •